Semalt: The Scrape Web Data Tips - Usatadza!
Kana usingakwanisi kuwana data inowanikwa muwebhu, Ndiwo dzimwe nzira dzingashandiswa nomunhu kuti awane nyaya dzinodiwa. Semuenzaniso, munhu anogona kuwana data kubva kune-web-based APIs, kubudisa data kubva pamapurisa akasiyana-siyana kana kunyange kubva pawindo rekutsvaga mawebsite. Kubvisa dhiyabhorosi kubva kuPPs ibasa rakaoma se PDF hazviwanzove rine mashoko chaiwo angadikanwa. Kune rumwe rutivi, panguva yekugadzirwa kwekona, zvinyorwa zvinobudiswa zvinogadziridzwa nekodhi kana kushandiswa kwekuchera - ñð°ð´ð¾ð²ð°ñ ð¼ðµð±ðµð»ñ ð´ð»ñ ñð»ð¸ññ. Kuwana doro data yebasa kunogona kuva basa rakaoma, asi kana munhu aine pfungwa yezvinodiwa kuti zviitwe, zvino zvinova nyore.
Dhairi-data inogona kuverengwa
Chimwe chezvinangwa zvakakosha zvekutsvaga webhutori ndechokukwanisa kuwana ruzivo rwakagadzirwa nemichina. Iyi dhesi inosimbiswa nekombiyuta yekugadzirisa, uye dzimwe mienzaniso yayo yemafaira inosanganisira XML, CSV, Excel mafaira, uye Json. Dhiyabhorosi-data inogona kuverengwa ndeimwe yenzira dzakasiyana-siyana idzo munhu angashandisa kuwana dhipe data yewebhu sezvo iri nyore nzira uye haifaniri hupamhi hwemaitiro kuitira kuti huitwe.
Kugadzira nzvimbo dzekutsvaga
Kugadzira mawebsite ndeimwe yenzira dzinowanzoshandiswa pakuwana ruzivo runodikanwa. Kune dzimwe mamiriro apo mawebsite haashande zvakanaka.
Kunyange zvazvo kubvisa webhusa kunonyanya kufarirwa, pane zvinhu zvakasiyana-siyana zvinokonzera kuwedzera zvakaoma. Zvimwe zvacho zvinosanganisira HTML code iyo yakanyatsorongwa uye kuvharwa kwehuwandu hwekutsvaga. Zvipingamupinyi zvepamutemo zvinogona kuvawo nyaya mukubata svrape web data sezvo kune vamwe vanhu vasingateereri kushandiswa kwemalayisensi. Mune dzimwe nyika, izvi zvinofungidzirwa sekusasa. Zvishandiso zvinogona kubatsira pakutsvaga kana kubvisa ruzivo zvinosanganisira ma web web uye dzimwe shanduro dzakapiwa zvichienderana neshandisi chekushandiswa iri kushandiswa. Dhepe web data inogona kuwanikwa muPython kana kunyange PHP. Kunyange zvazvo chirongwa chinoda unyanzvi huzhinji, zvinogona kuva nyore kana webhusaiti iyo inoshandiswa inoshandiswa.